VanSangVa Website မှ ကွညျဖွူစှာ နှုတျခှနျး ဆကျသ လိုကျပါတယျ။ | Basic Democracy Training - Burmese Version by Salai Kipp Kho Lian
VanSangVa Website မှ ကြည်ဖြူစွာ နှုတ်ခွန်း ဆက်သ လိုက်ပါတယ်။
တချိန်တခါက အတူတကွ တွေ့ဆုံပြီး ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့ သူငယ် ချင်း တစု၊ ယခု အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ပြန်လည် တွေ့ဆုံရင်း အတွေး အခေါ်၊ ဗဟုသုတတွေ ကို အတူတကွ လေ့လာ၊ ဝေမျှ၊ ဖလှယ် ကြဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ VanSangVa (အမြင့်ပျံငှက်) အင်တာနက်စာမျက်နှာကို ဖန်တီး လိုက်ပါသည်။
တောင်ဇလပ်မြေရဲ့ တနံတလျားမှာ အမြင့်ပျံ အောက်ချင်း ငှက် တို့ အတောင်ပံ တွေကို ဖြန့်ပြီး မြင့်သထက်မြင့်တဲ့ အသိပညာ ဝေဟင်ယံမှာ ပျံသန်းနိုင်ကြပါစေ။
Warmest greetings from the VanSangVa Website
For all of us who have established intimate friendships some time ago in the past, to be able to meet, communicate and share information and knowledge again this Vansangva (the high flying bird) website has been created.
May the high flying Hornbills from the breadth and width of the Rhododendon Land (Chinland) freely flap their wings over the skies of wisdom and knowledge.
February 28th, 2010 at 11:35 am